Ngokwe-WHO izinto, isifo senhliziyo (CHD) - umqedazwe kwekhulu lamashumi amabili. Kuyinto evamile emazweni athuthukile, ungumholi futhi ngokwempilo yangenyama nokukhubazeka, isibalo isifo kuyinsakavukela. Kuyini yenhliziyo Umthambo isifo (noma koronaroskleroza, isifo senhliziyo, ischemia)? On lokhu kamuva.
I IBS eside yakhiwa iqembu izifo sokuhamba kwegazi, lapho kunyatheliswa igazi e imithambo letiphakela igazi ukuze myocardium (senhliziyo esilimele). Kusukela amagama la imithambo (yenhliziyo), CHD ubizwa nangokuthi yenhliziyo Umthambo isifo.
Iminyaka ecishe ibe ikhulu ezimbili, ososayensi buthelela impahla oluyiqiniso, ukuvumela imininingwane ukuthi liyini yenhliziyo Umthambo isifo. Lesi sifo manje uthathwa njengomunye ezimele futhi polymorphic. Kunezinhlobo eziningana amafomu yayo nezinketho Yiqiniso.
Uhlobo oluvame kakhulu futhi okunzima senhliziyo kuyinto isilethikusebenza. Olunye uhlobo ezinzima zesifo - okungazelelwe ukufa yenhliziyo.
Ukuze amafomu njalo ukuvuza kukhona cardio atherosclerotic, okuyinto oluthatha indawo yokuqala inani lokuhlongakala hlangana izifo sokuhamba kwegazi, ukuhluleka kwenhliziyo, ezingamahlalakhona useshonile inhliziyo, izinhlobo ezahlukene arrhythmias.
Kuyini yenhliziyo Umthambo isifo: indlela lesi sifo
Inqubo elibanga isifo njengoba ischemia ezaziwayo. Lokhu singenele kwegazi myocardium ngenxa ukuvaleka noma Ukuvalwa ephelele mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi ku Umthambo. esingamahlalakhona coronary kuphakama kusukela abonobangela abahlukeneko.
ischemia zesikhashana e umuntu enempilo - iyimpendulo bokuphila ukuze lwemithambo spasm. Imbangela ngezinye izikhathi ingaba umthombo ukushintsha kwama-hormone, ubuhlungu, abandayo.
ischemia amade, okuholela izinqubo sokugembula ukuthi kungahle kubangelwe ukuvaleka i Umthambo ngumuntu thrombus, qwembe atherosclerotic, ezishukumisa begazi, isimila, nomzimba angaphandle ukuvuvukala zingenza, okuholela ukuvaleka we Umthambo.
Kuyini yenhliziyo Umthambo isifo: inkambo isifo
Ngokuvamile, isifo kwenzeka amagagasi, okungukuthi, izinkathi exacerbation nese nezikhathi yokuntula izimpawu ezikhathazayo. Uphawu oyinhloko uwukwenza neziqubu ubuhlungu enhliziyweni, kubangelwa angina. Babeqale zibangelwa yini ngengqondo, nokuthi ukucindezeleka ngokomzimba, zinengqondo futhi zizwakala - aphumule,.
Ukuqhubeka kwesifo kungase kuthathe isikhathi eside amashumi eminyaka. Late esiteji futhi exacerbation nezikhathi baphathe usongo enkulu isilethikusebenza.
UBANI yamukelwa 1979 CHD ngezigaba ikhomba amafomu emihlanu lesi sifo: eyinhloko ukuboshwa inhliziyo, angina voltage (kuqala okwenzeka, nisekeliwe okuqhubekayo) kanye nabo bonke abanye, isilethikusebenza (acute: izincazelo futhi kungenzeka, idluliselwe), ukuhluleka kwenhliziyo futhi arrhythmias.
Yenhliziyo Umthambo isifo: izimpawu
Izimpawu zincike okuyifomu lesi sifo isiguli edalulwa. Nokho, kukhona izimpawu ezivamile isixwayiso, khona lapho kuyadingeka ukubonana nodokotela asikisele. Lokhu kubandakanya noma yisiphi unemizwa engemnandi enhliziyweni (ukusinda, esivuthayo, ukungakhululeki, ubuhlungu), ikakhulukazi uma kwenzeka ephendula umthwalo ngesimo ukuhlaselwa futhi unganyakazi. Kuyadingeka ukuba banake ubuhlungu kwesokunxele ingalo nesiphanga blade yakhe.
Ukubonakaliswa nobuntu angina kuyinto "angina pectoris."
Ngo isilethikusebenza, ngaphezu ubuhlungu obukhulu ngemuva sternum, kukhona ukujuluka kakhulu futhi kwezinye izimo kukhwehlela.
Cardiosclerosis sinezimfanelo njengoba iphika nokucindezeleka kancane futhi uphumule.
Naphezu ukufana, izimpawu ezihlukile futhi izigaba ezahlukene yenhliziyo isifo Umthambo ukubonakaliswa ukumelana naso futhi kwenze ikhono ayeke ubuhlungu.
Andrey sana - the lephalamende Federation Council, uphuma esikhulwini Sevastopol